Sixitaan War aan sugnayn oo kusoo baxay Keydmedia Online | KEYDMEDIA ONLINE
Sixitaan War aan sugnayn oo kusoo baxay Keydmedia Online
Keydmedia waxay ka cudurdaaraneysaa warka marin-habaabinta ah, iyadoo u sheegeysa akhristayaasheeda in warkan uu ka yimid mid ka mid ah ilo-wareedyada aan ka helno Laamaha Amniga ee dowladda Federaalka.
MUQDISHO - Qormo kusoo baxday Keydmedia taariikhdu marka ay aheyd July 14, 2021 ayaa tibaaxday xog xasaasi ah oo ku saabsan in musharax Madaweyne C/kariin Xuseen Guuleed uu yahay qorshaha labaad ee Fahad Yasiin, taas oo ay Keydmedia soo xaqiijisay in uu yahay war aan sal iyo raad toona laheyn.
Qoraalkan ah ayaa sheegayay in uu kulan Muqdisho ku dhex maray C/kariin iyo Fahad maalmihii la soo dhaafay. U kuur-gal dheer oo arrintan ku saabsan ayay Keydmedia kusoo ogaatay in, xiliga kulanka la sheegayo in uu dhacay, uu C/kariin dalka ka maqnaa.
Qaar ka mid ah dadka ka faalloodda doorashooyinka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay C/kariin in uu yahay musharax galaangal siyaasadeed oo xoogan leh, taas oo walwal ku abuuray Xukuumadda Farmaajo iyo xubno ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne, kuwaas oo doonaya in ay sumcad dil ku sameeyaan ololihiisa madaxweynenimo.
C/kariin Guuleed ayaa muddo dheer ka soo shaqeynayey dhanka tacliinta iyo samafalka, wuxuuna ka mid ahaa shaqsiyaadkii bud-dhigay Jaamacadda Simad, oo ay ku najaxeen kumanaan arday Soomaaliyeed mudadii burburka.
Sanadkii 2012-ka ayaa C/kariin wuxuu si toos ah ugu soo biiray masraxa siyaasadda Soomaaliya, halkaas oo uu xilal heer wasiir ah kasoo qabtay dowladdii Xasan Shiikh, marna ahaa madaxweynihii Galmudug.
Keydmedia Online ayaa aaminsan in warkaan ay qaateen Safaxaddo kale oo sidii uu u qornaa usoo saartay (Copy-Paste).